Factory tour - Linqing Xinri Precision Ukunikela Co., ltd.
I-LINQING XINRI Precision Bearing CO., LTD. kuyinto umndeni ezikhethekile eziveza nomkhiqizi kusukela ngonyaka ka-2006, ifilosofi yethu: athole ukwethembeka ngokusebenzisa ukwethembeka, win ngokusebenzisa izinga, ukuthuthukisa ngokusebenzisa emisha, futhi wenze amathuba ethu siqu ngokusebenzisa umoya oshukumisayo.
Ngokuthengiswa konyaka kwamazwe angaphezu kwamadola ayizigidi ezingama-150 zamadola aseMelika kanye namandla asendlini angaphezulu kwamasethi angaphezu kwezigidi ezingama-7000, ezikhungweni ezingamamitha ayisikwele angaphezu kwezigidi ezi-2, iXRL ingomunye wabakhiqizi abakhulu abakhiqizayo emhlabeni. Eqinisweni, iXRL isivele ithengiswa emazweni angaphezu kwe-120 emhlabeni jikelele.
Ngemizamo ehlangene yabo bonke abasebenzi bokuthengisa be-XRL bearing, sesivele sithumele emazweni angama-120 emhlabeni wonke.
I-XRL nayo yaziwa nge-top-notch, i-responding, 24/7/365 service - wonke ama-imeyili namavoyisimeyili aphendulwa kungakapheli amahora ayisithupha, kuqinisekisiwe!
I-XRL Co., ineqembu eliqinile lobuchwepheshe nonjiniyela waseJapan ukuxazulula izinkinga ezahlukahlukene ekusetshenzisweni nasekusebenziseni amabhere ethu.
Ngaphandle kokuthengisa kwasekhaya, i-XRL bearing isivele ithunyelwe emazweni angaphezu kwe-120.
K ubheke phambili kuphela ekusebenzisaneni nabakhiqizi abakhiqize ngamabheringi asezingeni eliphakeme. Udinga ukusebenzisa i-XRL bearing ukufaka ama-SKF bearings emakethe yokugcina
Saziswa kakhulu ngokuthembela kwakhe, akakhulumi kakhulu futhi wabeka i-oda lesivivinyo kithi. Uthatha ikhwalithi endaweni ebalulekile futhi nathi sibe nenani elifanayo kulokhu.
Ngemuva kokuqulwa kwecala, ubesefake ama-oda amaningi kithi futhi, futhi sikhuluma ukuthi i-oda elisha liza maduze manje.
Sinezinhloso zokumthuthukisa abe yi-ejenti yomkhiqizo wethu weXRL ePakistan.
I-Russia iyimakethe enkulu yokusetshenziswa. Kepha njengenqubomgomo yokulwa nokulahlwa, Kwaba ubunzima obukhulu ekungenisweni kwamakhasimende kusuka eChina. Njengoba iminyaka eminingi inesipiliyoni sokubambisana nabangane nabalingani baseRussia, sinomthumeli ovuthiwe wokuthumela angenza ezokuthutha zisuka eMalaysia noma eThailand, zingonga kakhulu ikhasimende. Singenza iThailand neMalaysia CO ukuze ikhasimende lenze imvume yokusetshenziswa ngokwezifiso.
Ubudlelwano be-Afrika nathi buhle njengalobo obuphakathi kwezihlobo ezikude nomakhelwane abaseduze. Ekuqaleni, uJ waqala kusuka kumasampula izingcezu ezimbalwa ukuze avivinye ikhwalithi nempendulo yemakethe. Kamuva wenyusa inani le-oda isikhathi nesikhathi, Ngisho nangesikhathi esinzima kunazo zonke se-coronavirus ngo-Ephreli 2020, naye wabeka i-oda elilodwa kithi, saziswa kakhulu ngokuxhaswa okuvela kuye. Njengokufakwa kwekhwalithi ephezulu nobuhle bamabhere we-XRL, yathengiswa ngokushesha ezinsukwini ezimbalwa ngemuva kokufika ethekwini.
U-N ungummeli wethu ePeru, futhi wayengummeli wethu wokuqala emazweni aseNingizimu Melika. Uqale kusuka ku-oda lokuqala elincane futhi waletha i-LCL, Kepha manje usenga-oda isitsha esingu-1 * 40FT inyanga ngayinye. Manje, asisibo abalingani bebhizinisi kuphela futhi abangani abahle empilweni.
Ukuba ngumenzeli wethu ngomkhiqizo weXRL, simnikeza ngesipho sokukhangisa mahhala, njengezipeni nezikibha ezine-XRL LOGO, futhi sinikeza nokuvikelwa kwemakethe kanye nensizakalo engcono kakhulu yobungcweti, Sakha imakethe sibambene. Futhi sethemba ukuthi uzoba yi-ejenti enkulu emazweni aseNingizimu Melika kungekudala.
Sihlangana embukisweni waseShanghai 2016. Senza i-OEM ngomkhiqizo wayo we-T, Wayene-oda elihle kakhulu unyaka ngamunye futhi amabhere athengisa kahle emakethe yase-Ukraine.
U-Y futhi wayevela e-Ukrain, Wayesebenzisana nebhizinisi lezingxenye zokuzenzakalelayo endaweni yangakini, wayeya eChina kaningi unyaka nonyaka ayothenga, waye-oda kakhulu amabombo we-brand LADA, VPZ, VBF, SPZ Njll ..
UM usithole ngewebhusayithi yenkampani, futhi usevele ufake ama-oda ama-5 amayunithi manje. Yize ubuningi bama-oda bungebukhulu, bunamandla amakhulu okuthuthuka. Ngaphezu kwalokho, ForIsi-Vietnamese emakethe, besinolwazi oluningi lwale makethe, silindele amabheringi asezingeni eliphakeme futhi singabanikeza isitifiketi seCOPE sokubasiza ukuthi benze imvume yangokwezifiso ngentela yokungenisa ephansi.
Meyi 2016 I-Shanghai Everbright Exhibition XRL ethwele
Septhemba 2016 Shanghai World Expo XRL eziveza
2016 Autumn Canton Fair XRL eziveza
Septhemba 2017 Shanghai World Expo XRL eziveza
2018 Shanghai World Expo XRL eziveza
Umkhiqizo we-2018 Shanghai World Expo XRL
Indawo yokugcina impahla yasefektri